Oovimba beCarbon Footprint
Udidi: Imibhalo yenyawo yekhabhoni
I-Bitcoin's Carbon Footprint: Iinkampani eziSekwe kwi-Cryptocurrency zihamba ngeCarbon engathath'icala
Kwiiveki ezimbini emva kokuba u-Elon Musk edume nge-tweet malunga neTesla ephelisa ukwamkelwa kwe-BTC yezithuthi zayo ngenxa ye-Bitcoin's carbon footprint, iindlela ezimbini eziphambili zotshintshiselwano lwehlabathi (FTX kunye neBitMEX) zibhengeze ukuba azizukuthatha cala ngokupheleleyo.
Iqonga lezorhwebo elisekwe eSan-Francisco i-FTX iqinisekisile ukuzibophelela kwayo kwisizathu esiluhlaza ngokusebenzisa i-tweet ngolwe-Sihlanu. Nangona utshintshiselwano luthi i-Bitcoin ayingoyena mthengi mkhulu wombane, yavuma ukuba i-cryptocurrency yokubekwa kwemali inendima ebalulekileyo “Ikamva eliluhlaza.” Isibambi se-FTX ku-Twitter siqaphele ukuba:
“I-BTC ayingoyena msebenzisi mkhulu wamandla, kodwa sithatha impembelelo yethu kwihlabathi ngokungathí sina. Ukuza kuthi ga ngoku: I-FTX izimisele ukungathathi cala kwikhabhoni. ”
Kwakhona, utshintshiselwano luqaphele ukuba luza kunika i-1 yezigidi zeedola kulo nyaka kwimibutho ethile ehlawula ikhabhoni. USam Bankman-Fried, igosa eliyintloko lotshintshiselwano, wathi:
"Sisonke, singenza umhlaba ube yindawo engcono, kwaye oko akuthethi ukuba kufuneka siyiyeke into esikholelwa kuyo."
Kungekudala emva kwesi sibhengezo, iBitMEX yathatha i-Twitter, ikhupha intshukumo ye-FTX. I-Seychelles esekwe kutshintshiselwano lwemali yedijithali ibhengeze ukuba iyakuthatha amanyathelo okuqinisekisa ukuba ayithathi cala kwikhabhoni, yongeza ukuba kungekudala iza kuqala ngolawulo lwe-CO2.
IBitMEX ithembise ukunikela nge- $ 0.0026 kuyo yonke i-1 yeedola zeebhloko ze-blockchain ezihlawulwe ngabasebenzisi bayo njengomboniso wokuzibophelela.
Utshintshiselwano luye lwaphawula ukuba ukuseta ikhabhon yonyawo lwe-imali yedatha sisiqalo esihle kwikamva eliluhlaza, uqaphele ukuba:
"Kungoku nje siphanda ukuba yeyiphi na imibutho enokusebenza kakuhle kakhulu ukusebenzisana nayo, kwaye sikwazibophelela ekupapasheni iinkcukacha zokuba yimalini kwaye sinikela kubani."
Iinkampani ezininzi ziyazibophelela ekunciphiseni iCarbon Footprint yeBitcoin
Kwiveki ephelileyo, iGreenidge Generation Bitcoin Mining, inkampani yemigodi ye-behemoth BTC, ibhengeze ukuba ayizukuthatha carbon kwi-2021 nangaphaya kwaye ityale imali kwimithombo yamandla e-US evuselelekayo.
Ifemu yongeze ukuba iyakuthengisa izibonelelo ze-CO2 ngeefandesi kwaye ityale imali eyinkunzi eveliswe kumandla ahlaziyekayo kunye nokusebenza kwamandla.
tags Bitcoin, IMIBHALO YENYAWO YEKHABHONI, Cryptocurrency, iindaba